Jwxo-shiil, oo Jarmal Faladh Kooxdiisa ah ku Shirinaya – Rasaasa News
Jwxo-shiil, oo Jarmal Faladh Kooxdiisa ah ku Shirinaya
Apr 24, 2011 2011 [ras] - Waligii Jwxo-shiil, April 24, Germany, isaga oo ka dhuumanaya sharciga dalka Ingriiska., Jwxo-shiil, Offenburg, oo Jarmal Faladh Kooxdiisa ah ku Shirinaya, oo Yurub imanaya kama soo dago dalka uu sharcigiisa haysto ee Ingriiska, wuxuuna ka dagaa dal kale oo Yurub ah
Offenburg, Germany, April 24, 2011 [ras] – Waligii Jwxo-shiil, oo Yurub imanaya kama soo dago dalka uu sharcigiisa haysto ee Ingriiska, wuxuuna ka dagaa dal kale oo Yurub ah, isaga oo ka dhuumanaya sharciga dalka Ingriiska.
War aanu ka helay magaalada Offenburg oo in yar u jirta garoonka caalamiga ah ee Frankfurt, ayaa sheegaya in Jwxo-shiil, iyo faladh yar oo kooxdiisa ah, ay ku kulmeen halkaas oo uu ka degay maalintii doraad ahayd isaga oo ka yimid Eritrea.
Kooxdiisa, oo u kala go,oday faladhyo yar yar oo iswada haysta, ayaa faladh isaga raacsan waxay kulan ku leeyihiin magaalada Offenburg. Waxaana kulankaas jooga duqaydii haa mooyee aan waligood maya odhan Jwxo-shiil, oo ay ka mid yihiin Abdidoon, Qaaxo iyo Macalin Diirane.
Waxayna wararku sheegayaan in Jwxo-shiil, uu ku gaydhay faladhkaas, isaga oo waliba caayey beesha reer Cabdile isaga oo yidhi “reer Cabdillow idinkaa axmaara u tagay, waxa ila socdan idinkaa ugu badan, hadaad dad tihiin dhinac isugu guda.” “Waan dhigayaa xilka ee car ma idinku jiraa nin qabta.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata, ayuu yidhi “wixii hada ka dambeeya ruuxii hadalxumo laga maqlo ee reer Cabdile ah meesha uu doono ha joogee waa la karbaashi, kamana hadli kartiin.”
Kolkii uu hadalka dhameeyey ayuu waydiiyey yaa su,aal qaba, Abtidoon ayaa farta taagtay oo yidhi “xilka ha layga wareejiyo.” Jwxo-shiil, intuu qoslay buu yidhi “aniguba wax igala wareega idinka waayey ee hadaad hesho wax ku badala waxba kama qabo.”
Jwxo-shiil, oo doonayey in ay kooxdu ku kulanto Sweden, ayaa isbadalay ka dib kolkii uu maqlay xan ah in la doonayo in lagu badalo Cabdulahi Mukhtar.
Cabdulahi Mukhtaar, ayaa isaguna faladh kooxda ka mid ah oo ay u egtahay in ay ka go,oday ku shirinaya dalka Denmark. Kooxda Jwxo-shiil, oo aad u kala daadsan, kuna jirta gacan ku gabad, ayaan isku duubni iyo kala tag midna wanaag lahayn.
Xubno muhiim u ahaa kooxda, ayaa iyaguna ka gaabsaday kulankan Offenburg iyo Copenhegan iyo waliba kii Eritrea ka dhacay January, xubnahaas oo uu ka mid yahay Cabdiqadir Xasan Hirmooge oo isagu baryahanba gees u daaq ahaa.
Dhulbeereedkii oo Qardobay, Abaaro iyo Waliba Xuduudii Gabalka Ogaden oo Xidhan